Isipelingi kanye nohlelo lolimi Hlola Nge-Grammarly | Martech Zone
Uma uke waba ngumfundi we Martech Zone isikhashana, uyazi ukuthi ngingalusebenzisa impela usizo oluthile emnyangweni wokuhlela. Akukhona ukuthi anginandaba nokupela kanye nohlelo lolimi, ngiyakwenza. Inkinga ingeyokujwayelekile. Sekuyiminyaka, ngibhala futhi ngishicilela izindatshana zethu endizeni. Abahambi ngezinyathelo eziningi zokuvunywa - bayacwaningwa, babhalwe, futhi bashicilelwe.
Ngeshwa, lokho kungibangele amahloni njengoba ngishicilele okunye okungenangqondo amaphutha ohlelo lolimi eminyakeni edlule. Ngikhulumile ngisho nabanye ababhali bamakhophi wethu ngokubanikeza isamba ukugcina lokho engikuthumela nsuku zonke. Kodwa-ke, angifuni ukulinda ukuze ngishicilele ngakho-ke bengikubeka eceleni. Ukungakhulumi ngeqiniso lokuthi ngingahle ngingathandi ukuthi izincomo zabo zishintsha kanjani ithoni yomsebenzi wami. Ngikugweme ngobuqotho ukuhamba umzila wokuhlela. Futhi, ngibhala izindatshana eziningi kakhulu ukuthi ngidinga ukuthuthukisa umyalo wami wolimi lwesiNgisi.
Bangaki Amaphutha Ohlelo Lolimi Nopelingi Abantu Abenza Ku-inthanethi?
Akumina ngedwa! Uhlelo lolimi ihlaziye amagama angaphezu kwezigidi eziyinkulungwane ukufundwa kabusha ngohlelo lwabo lokubhala oludumile phakathi nenyanga eyodwa. Nakhu abakutholile:
Abantu benze amaphutha aphakathi kwama-39 ngamagama ayi-100 kokuthunyelwe kwabezindaba zenhlalo. Ama-imeyili alandela ngamaphutha ayi-13 ngamagama ayi-100 nokuthunyelwe kubhulogi kungaphansi kakhulu kunamaphutha ayi-6.5 ngamagama ayi-100.
Abantu banamathuba aphindwe kathathu okwenza amaphutha kokuthunyelwe kwezokuxhumana kunathi kunoma yiluphi olunye uhlobo lokubhala online. Ngicabanga ukuthi okunye kwalokhu kuhlobene nemikhawulo ye-Twitter (akukho ukuhlela) kanye nemvelo yokuxoxa yemithombo yezokuxhumana.
Izinyoni zokuqala ezibhala phakathi kuka-4: 00 ekuseni no-8: 00 ekuseni zenza amaphutha ambalwa ngo-18.2% kunokubhala izikhova zasebusuku phakathi kuka-10: 00 ntambama no-2: 00 ekuseni. (Uh-oh)
Yimaphi Amaphutha Ohlelo Oluphezulu Nopelomagama Abantu Abenza I-inthanethi?
Amaphutha we-Apostrophe (isib. ake vs. lets)
kakhulu vs. Kuya
Nsuku zonke vs. Nsuku zonke
Lapho vs. Zabo
Than vs. Bese
Ungahle ubone intuthuko kule ndawo, njengoba ngitshale imali kwilayisense yonyaka ye- Grammarly, insizakalo evame ukubizwa ngokuthi isihloli sohlelo lolimi oluhamba phambili emhlabeni. Qedela ngesandiso sesiphequluli, ngikwazi ukubhala ngokushesha futhi ngilungise amaphutha ngaphandle kokushiya isihleli sami.
I-Grammarly: Ipulatifomu Yokuhlola Uhlelo Olungcono Kakhulu
Grammarly insizakalo engingayisebenzisa nganoma iyiphi ipulatifomu noma isoftware. Nazi izibonelo:
Umhleli wohlelo lolimi - Umhleli we-Grammarly umnandi, ngokubheka ukupela, ukuhlolwa kohlelo lolimi, ukuhlola okukhohliwe, izincomo zabalaleli, ukuhlolwa kokuhleleka, ukufundwa, ukutholwa kwethoni, inhloso, ukushaya amaphuzu jikelele, izinhloso, iziphakamiso zamagama, ukushintshwa okuhle, ukubalwa kwamagama, ubude bemisho, nokuningi.
Uhlelo lokusebenza lwe-Grammarly Desktop - I-Grammarly inohlelo lokusebenza oluzimele olungasebenza kunoma yiluphi uhlelo lokusebenza. Yipulatifomu esekwe kuwebhu lapho ungagcina khona ukugcinwa kwayo yonke imibhalo yakho.
Uhlelo lolimi lwe-iPad - I-Grammarly inohlelo lokusebenza oluzimele olungasebenza ku-iPad.
Izandiso Zesiphequluli Segrama - I-Grammarly inezandiso ezinhle zesiphequluli. Ngisebenzisa isandiso se-Safari khona manje ngaphakathi kwesihleli se-WordPress 'Gutenberg njengamanje kule ndatshana. Noma iliphi ikhasi lewebhu elinenkambu yombhalo lenza i-Grammarly ikusize ngokuzenzakalela. Futhi ngaphezu kwakho konke, ungathola ukusebenza okuyisisekelo mahhala!
I-Grammarly Office Faka - I-Grammarly ine-add-in yehhovisi ye-Windows noma ye-Mac.
Ikhibhodi yohlelo lolimi - Uma ukwiselula, ungafaka futhi usebenzise ikhibhodi ye-Grammarly ukusiza ikhophi yakho ephathekayo.
Ibhizinisi lohlelo - Ingabe inkampani yakho inemihlahlandlela ethile yesitayela lapho ibhala? I-Grammarly Business ikuvumela ukuthi uqondise wonke umuntu ngaphakathi kwenkampani yakho ukuthi alandele izinkombandlela zakho.
Qalisa Nge-Grammarly Mahhala
Ungawahlola Kanjani Amaphutha Wegrama Nokupela nge-Grammarly
Ukusebenzisa i-Grammarly kulula. Esifundeni sombhalo osebenza kuso, uzobona izingqinamba zesipelingi nohlelo lolimi zidwetshelwe. Chofoza isithonjana se-Grammarly bese ups umhleli wokujula onalo lonke ulwazi oludingayo ukuze uthuthukise ikhophi lakho.
Nayi ividiyo enhle yokuthi i-Grammarly isebenza kanjani:
Uma lokho kungezona izinto ezanele kuwe, kuthiwani nge-imeyili yamasonto onke ukukwazisa ukuthi uqhuba kahle kangakanani uqhathanisa nabanye abasebenzisi be-Grammarly? Yebo, bathumela eyodwa! Futhi cha, angihlanganyeli nokwami.
Qaphela: Ngisebenzisa my Grammarly izixhumanisi ezihambisanayo kukho konke lokhu okuthunyelwe.
Tags: izincomo zezethameliemaphutsa esipelingiamathuluzi wokuhlelaamathuluzi wokuhlelaamaphutha ngamagama ayi-100ukuhlolwa kwamasikoimigomouhlelo lolimiuhlelo lokusebenza lolimiisheke lohleloisihloli sohlelo lolimiukuhlolwa kohlelo lolimiithuluzi lolimingolimiinjongoizipelingiamaphuzu jikeleleukukopela ukukopelaizimpawu zokubhalaukufundekaukuhlola ukupelaukuhlola ukupelaisipelingiuhlelo lokusebenza lwesipelingiisihloli sesipelingiithuluzi lesipelingiukutholwa kwethonisilulumagamaukubala kwamagamaemaphutsa emagamaiziphakamiso zamagama
Mar 24, 2016 ku-4: 22 PM
Ngiyayihlola njengamanje. Ingabe kukhona isici esitshela ukuthi singazinaki izinhlamvu ze-html kudokhumenti? Okwamanje, lapho ngibhalela iwebhu, ngimane ngifomethe njengoba ngihamba futhi uhlelo lolimi lwanele luyalingana, ikakhulukazi uma Lutholakala ohlwini.
Futhi, grr, izoyisekela nini iGoogle Drayivu?
Ngaphandle kwalokho, kuyamangalisa.
Mar 25, 2016 ku-5: 45 PM
I-Google drive ingaba isici esihle! Ngivele ngiyikhiphe ku-Grammarly ngiyilethele umqulu wami.